ကိုကိုကြီး ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်သို့ ပေးစာ | The FNG
ကိုကိုကြီး ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်သို့ ပေးစာ
September 7, 2012 · by 21 South News	· in ပေးစာ.	·
ဦးအနေနဲ့ ဒီစာကို ရေးရကောင်းနိုး၊ မရေးရကောင်းနိုး ချီတုံချတုံ စဉ်းစားခဲ့ပြီးမှ လူအုပ်စုတစ်စု၊ ရွာတစ်ရွာကို ရပ်တည်ရာမဲ့အောင် သေဒဏ်ပေးသလို အခြေအနေမျိုး ဆိုက်သွား နိုင်တာမို့ ၀င်ရှင်းမပြရင် တာဝန် မကျေ သလို ခံစားရလို့ ဒီစာကို ရေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့တူအနေနဲ့ အကျဉ်းထောင်က လွတ်လာခါစက မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ လက်လွတ် စပယ် မဖြေသေး ဘဲ ပြင်ပနဲ့ကင်းကွာနေတာကြာပြီဖြစ်လို့ လေ့လာစရာတွေ လေ့လာရဦးမယ်လို့ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်ပြောခဲ့ တာကြောင့် ငါ့တူတွေ ရင့်ကျက်လာပြီဆိုပြီး လေးစားချီးကျူးမိခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားလုပ်မဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သမိုင်း၊ ပထ၀ီ၊ ဒဿနိက၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံ တကာရဲ့ မျက်မှောက် အခြေအနေ စတာတွေကို မသိဘဲ မလေ့လာဘဲ ရှေ့ဆက်လို့မရနိုင်ဘူး ဆိုတာ အမှန်ပဲ မဟုတ်လား။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ငါ့တူတို့ ၈၈-လူငယ်တွေ တစ်ပြည်လုံးအနှံ့သွားပြီး လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအခြေခံနဲ့ လွတ်လပ်လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်ပေါက်ရေးဆိုပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အလုပ်လုပ် နေကြတာကိုလည်း အားတက် ဂုဏ်ယူမိ သလို ငါ့တူတို့ ခလုတ်မထိ ဆူးမငြိစေဖို့၊ အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း ဆုတောင်းမပျက်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ လူထုကို ပန်းတိုင်မပျောက်အောင် လမ်းပြ ထိန်းသိမ်းတည့်မတ်ပေးနေတာတွေကိုကြည့်ပြီး ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော် သား ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
၈၈-ဆိုတာ ဦးကိုယ်တိုင် ယုံကြည်အားကိုးတဲ့ နိုင်ငံရေးအရိယာလေးတွေ၊ ဖြူစင်တယ်၊ ပြတ်သားတယ်၊ ဘက် မလိုက်ဘဲ အမှန်တရားအတွက် တည့်တည့်ပြောတတ်သူတွေလို့ နှလုံးသားမှာ သစ္စာဆိုထားခဲ့တာပါ။ ၈၈ ဆို တာကို စကတည်းက ယုံကြည်လို့လဲ ဦးရဲ့ တစ်ဦးတည်း သော သားကို ခွပ်ဒေါင်းသစ္စာနဲ့ တူမောင်တို့ လက်ထဲကို ၀ကွက်အပ်နှံခဲ့တယ်။
မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ် ကြံ့ကြံ့ခံရင်း သားပျောက်၊ သမီးပျောက်နဲ့ ၀ရုန်းသုန်းကား မိသားစုဘ၀ ပြိုကွဲ ပြီး ကျောက်ကပ် ရောဂါသည် ဇနီးဖြစ်သူကို အနီးကပ်ပြုစုနေရလို့ အဝေးရောက် သားသမီးတွေအတွက် အလွမ်းပြေအောင် တူတော်မောင်တို့ လူသိုက်ကိုကြည့်ရင်း အားမွေးနေရသူပါ။
ဦးကိုယ်တိုင်က အညတရ နိုင်ငံရေး ခရီးသည်ဘ၀အစ ၁၉၆၂-ခုနှစ်၊ သတ္တမတန်း ကျောင်းသားဘ၀မှာ ပုသိမ်
ဥပစာကောလိပ်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုနေ၀င်းစံ၊ မမိမိစံ၊ ကိုလှိုင်ဘွားနဲ့ အလွတ် ပညာသင်ကျောင်း သိန်းကောလိပ်က ခေါင်းဆောင် ကိုဖြူတို့နောက်က ကလေးပီပီ ထုံးပုံးနဲ့ တံမြက်စည်းတံကိုကိုင်ပြီး၊
““ကျောင်း တိုင်းဖွင့်ရမည်၊ ပန်းတိုင်းပွင့်ရမည်””
““ဒို့ကျောင်းသားသွေးနဲ့ ရေးတဲ့ဥပဒေ ဒို့အလိုမရှိ”” ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို ကတ္တရာလမ်း မှာရေးရင်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူပါ။
ဦးရဲ့သားကလေးဟာလည်း ဒီလိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပဲ မင်းတို့လက်ထဲကို ရောက်လာခဲ့တာ မဟုတ် လား။ ဒါတွေကို ရေးပြနေရတာက ဦးရှေ့ဆက်ပြောမဲ့ အကြောင်းတရားတွေဟာ မလိမ်၊ မညာ၊ မကွယ်၊ မ၀ှက်ဘဲ ရိုးဖြောင့်တဲ့ခွပ်ဒေါင်းသစ္စာနဲ့ ပြောနေကြောင်း ငါ့တူသိစေချင်လို့ပါ။
၁၉၆၉ ကျွန်းဆွယ်အရေးအခင်းမှာ အဖမ်းခံရပြီး ကျောင်းပါအထုတ်ခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၇၄ အလုပ်သမား အရေးအခင်းနဲ့ ဦးသန့်အရေးအခင်းကာလတွေမှာ ကလေး(၃)ယောက်အဖေ ဖြစ်နေပေမဲ့ မာန်မလျှော့စတမ်း ၀င်ကခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းထဲက သမဂ္ဂနေရာဟောင်းမှာ ဦးသန့်ရဲ့ဂူဗိမာန်ကို ဆောက်ကြတဲ့အထဲ ဦးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဒီရေလှိုင်းတံပိုးတက်တိုင်း အညတရဘ၀နဲ့ ၀င်ကခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက်ပါ။
၈၈-အရေးအခင်းရယ်လို့ စစချင်း ဘုန်းမော်ကိစ္စအလွန် မတ်လမှာ ဦးအဖမ်းခံရတယ်။ ဇွန်လမှာ တစ်ကျော့
ပြန်ဖြစ်ပြီး တောင်းဆိုကြလို့ ဇူလိုင်လမှာ ဦးတို့ပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်။ ထောင်ထဲက ပါလာတဲ့ဒဏ်ရာ တွေ ကို ဆေးကုနေတဲ့ကြားက ၈ လေးလုံးဆိုပြီး ရက်ချိန်းပေး လိုက်တော့ ““မြန်မာမွတ်စလင် သပိတ်ကော် မတီ””ကို ၀မ်းအိုဝမ်း ဦးကျော်ဝင်းမောင်၊ ဦးထွန်းကြည်(ကွယ်လွန်)၊ ကိုဌေးလှိုင်(ကွယ်လွန်)တို့နဲ့ အတူ ဦးဆောင် ဖွဲ့စည်းပြီး S.C.S မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ရင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး သပိတ်စခန်း မှာ နေ့ရော ညပါ တောက်
လျှောက်ပါဝင်ခဲ့ သူပါ။ ဒါလည်း အညတရဘ၀နဲ့ပါပဲ။
အကသ ကျောင်းသားလေးတွေဖြစ်တဲ့ မင်းဇင်၊ သက်ဝင်းအောင်၊ ရဲတေဇာ၊ဗထူးအောင်၊ မောင်ဆန်း၊ ဇေယျကြီး (အင်းစိန်)၊ စိုးမိုး၊ ကျော်သူရ စတဲ့ကလေးတွေဟာ ဦးရဲ့သား ဇေယျာဝင်း ကို အကြောင်းပြုပြီး ဦးရဲ့အိမ်ကို စားအိမ်၊ သောက်အိမ်၊ ဆုံရပ်အဖြစ် သုံးခဲ့ကြတယ်။ ၈-လေးလုံးကို ဖြိုခွင်းပြီးစစ်အာဏာသိမ်းလိုက် တဲ့ အခါ ကျောင်းသားတွေ တပ်ဖျောက်ခဲ့ကြပေမဲ့ ဒီကလေးတွေကတော့ ဦးတို့ မိသားစုနဲ့ တစ်သားတည်းရှိနေ ဆဲပါ။
နောက်ပိုင်းမှာ ဦးရဲ့သား ဇေယျာဝင်းလည်း ထောင်ထဲကို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး အကြိမ် မှာ တော့ တော်တော် နှစ်ကြာသွားခဲ့တယ်။ ဒီအတောအတွင်း ငါ့တူလည်း ထောင်ထဲရောက်နေတုန်း အပြင်မှာ အဖေ ဆုံးသွားတာကအစ ဦးသိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၈၈ ရဲ့ရဲမာန်နဲ့သတ္တိဟာ ဓားတောင်ကိုကျော်ပြီး မီး ပင်လယ်ကိုပင်ဖြတ်ရဲတယ်ဆိုတာကို ဦးအသေအချာ ယုံကြည်နေတဲ့အတွက် ငါ့တူတို့ ဘာကိုပဲလုပ် လုပ် ထောက်ခံပြီးသားပါ။ ဦးရဲ့ဒီသဘောထားကို ငါ့တူတို့အထဲက ကိုဂျင်မီနဲ့ မနီလာသိန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံ အသိဆုံးပါ။ ဒီနေ့ထိလည်း ၈၈ ကို စိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ငါ့တူရယ်- ငါ့တူရဲ့ရခိုင်ခရီးစဉ်က အပြန် သြဂုတ်လ (၅)ရက်နေ့သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ ကျောက်နီမော် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါ့တူရဲ့ရိုက်ချက်ကတော့ ပြင်းလွန်းလှတယ်။ ငါ့တူအပေါ် အမျိုးသားရေး ဆိုတဲ့ မျက်မှန်စိမ်းကိုတပ်ပြီး၊ မျက်ရည်ခံထိုးရင်း အိပ်မွေ့ချ၊ နဖားကြိုး ထိုးသွားတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နာဇီလက်သစ် ၀ါဒီတွေရဲ့ အငိုကောင်းကောင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြားမှာ ငါ့တူရဲ့ ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားဟာ ညစ်နွမ်းခဲ့ရပြီ။
ငါ့တူတို့ ရခိုင်ကိုမသွားခင် ရခိုင်သမိုင်းကို လေ့လာသင့်တယ်။ ရခိုင်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ ဓည၀တီ ခေတ်၊ ဝေသာလီ
ခေတ် နိုင်ငံတော်တွေဟာ ပုဂံထက်တောင်ရှေးကျတယ်။ ဒီခေတ်က ရခိုင် ပြည်သားတွေဟာ အင်ဒိုအာရိယန် ဆိုတဲ့ အိန်္ဒိယနွယ်ဖွားတွေ၊ မွန်ဂိုလွိုက် ဒါမှမဟုတ် တိဘက် တိုဘာမင်လို့ခေါ်တဲ့ ဗမာနဲ့အနွယ်တူသူတွေ က အေဒီ ၉ရာစု၊ ၁၀ ရာစုကမှ ရခိုင်ကိုဝင်လာပြီး လေးမြို့ခေတ်၊ မြောက်ဦးခေတ်တွေမှာ မင်းဆက်တွေ ထူထောင်ခဲ့ကြတာ။
ငါ့တူရောက်ခဲ့တဲ့ ကျောက်နီမော်၊ ကျောက်ထရံရွာတွေက လူတွေဟာ ဝေသာလီလား၊ ဘင်္ဂါလီလား ခွဲခွဲခြားခြား နားလည်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ ငါ့တူနဲ့ အတူပါတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ဆိုတဲ့လူက လာတုန်းက နည်းနည်းလေး အခု များလာတော့ ပင်လယ်ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်ကို လုံခြုံအောင်ပိတ်ပေါ့၊ ငါးဖမ်းလှေထဲမှာ လူပိုတွေ ပါလားမပါ လား ဘယ်သူသိမှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကြားရတော့ ဦး ရယ်ချင်မိတယ်။
ကဲ-ပြောစရာရှိလာပြီဆိုတော့ ဦးပြောရတော့မယ်။ ကျောက်ထရံ၊ ကျောက်နီမော်စတဲ့ ရွာတွေဟာ အေဒီ ၇ ရာစု
လောက်ကတည်းက ရှိနေတဲ့ရွာတွေဆိုတာ အထောက်အထား အခိုင်အမာရှိတယ်။ မူလက ဝေသာလီ ဟိန္ဒူတွေ၊ ဇာတ်မျိုးရိုးအရ ငါးဖမ်းတဲ့လူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။
၇ ရာစု ၈ ရာစုတွေမှာ သင်္ဘောပျက် အာရဗ်တွေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာရော၊ အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ယုံကြည်မှု ကူးပြောင်းတာ တွေကြောင့်ရော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာကြတယ်။ တဖြည်း ဖြည်း လူဦးရေ တိုးပွားလာကြတယ်။
ငါ့တူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ထရံရွာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၈၀၀ လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ ပလီချေ(ပလီအသေး) နဲ့ နှစ် ၇၀၀ လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဗလီကြီးဆိုတာ အထင်အရှားရှိတယ်။ ငါ့တူတို့ မရောက်ခဲ့ဘူး ထင် တယ်။
ကျောက်နီမော်ဆိုတာ မူလ ကျောက်ထရံရွာသားတွေ လာပြီး ပိုက်စခန်းချရာကနောက်ပိုင်းမှာ ရွာ အတည် တကျ ဖြစ်လာတာ။ အဲဒီမှာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀၀ လောက်က ဆောက်ခဲ့တဲ့ မကျီးတောဗလီဆိုတာ ရှိတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့စကားမှာ အာရဗီ၊ ဟင်ဒီ၊ အူရဒူ၊ ရခိုင်၊ ဘင်္ဂါလီ၊ အင်္ဂလိပ် စတဲ့ဘာသာ စကား တော်တော် များများရောနေတာ တွေ့ရမယ်။ ဒါက ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေ သုတေသနလုပ်ပြီးမှ အဖြေထုတ်နိုင်မဲ့ ကိစ္စပါ။ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ ဘာသာစကား တစ်ခုကို ပြောတိုင်း ဘင်္ဂါလီစကားပါလို့ လိုရာဆွဲပြောလို့မရဘူး။
လာတုန်းက နည်းနည်းလေး အခုအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ကောက်ချက်ချတာ ဟာ တော်တော် ဉာဏ်ပညာ မရှိတဲ့ ကောက်ချက်မျိုးလို့ ပြောချင်တယ်။ နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ လူတစ်စုမပြောနဲ့ လူတစ်ယောက်ကတောင် သားစဉ်မြေးဆက်ထူထောင်ရင် ရွာတစ်ရွာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သာမန်ဉာဏ် နဲ့တွေးကြည့်ရင်တောင် သိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။
နောက်ပြီး ငါးဖမ်းလှေထဲမှာ လူပိုတွေ ပါလားမပါလား ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့စကားက အခြေအနေမှန် ကို မသိဘူးဆိုတာ ၀န်ခံရာရောက်နေပါတယ်။ ကျောက်နီမော်က ပင်လယ်ကို ငါးဖမ်းထွက်မဲ့ စက်လှေတစ်စီးမှာ ပါတဲ့ လူအားလုံး (၁) ဓာတ်ပုံကိုကပ်ပြီး ပုံစံဖြည့်ရတယ် ပြီးတော့ (၂) ရယက (၃) လ-၀-က (ပိတ်ဆို့ရေး) (၄) စ-ရ-ဖ (၅) ရဲစခန်း (၆) ရေလုပ်ငန်းဦးစီး ဆိုတဲ့ ထောက်ခံချက် အဆင့်ဆင့်ကို စရိတ်အကုန်ခံရယူပြီးမှ စက်လှေ ကိုပါ စစ်ဆေးပြီး ပင်လယ်ကို ထွက်ခွင့်ရတယ်။
ပြန်ရောက်ရင်လည်း ကမ်းကိုမကပ်ခင်မှာ သက်ဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့တွေ က လှေပေါ်အရောက် စစ်ဆေးပြီးမှ ကမ်းကပ်ခွင့်ရတာပါ။ ဒါတွေလုပ်လို့ ဘယ်လိုစရိတ်တွေ ကုန်နိုင်တယ်ဆိုတာ ငါ့တူ ခန့်မှန်းကြည့်ပေါ့။
ဒီလိုချုပ်ကိုင်မှုတွေကြားမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နေတဲ့ တံငါသည်တွေက ဘာအကြောင်းကြောင့် လူပိုတွေကို ခေါ်လာမှာလဲ။ ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလူတွေကရော ဒီလိုတံငါရွာကို ဘာမျှော်လင့်ချက်ရှိလို့ လာကြမှာလဲ။ ငါတူ စေ့စေ့တွေးကြည့်ပါ။ မ-ဆ-လ ခေတ်နဲ့ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ ဖွတ်ကျောပြာစုနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကို ဘယ်ဘင်္ဂါလီမှမလာဘူး။ ချမ်းသာတဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေ ဆီကိုသာ သွားကြ မှာပေါ့။ ဒါကိုသိတဲ့ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကတောင် နောက်ပိုင်းမှာ ၀င်လာတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါ လို့ ပြောနေပြီလေ။
ဦးရဲ့စကားကို ပြန်ကောက်ရရင် ဒီကျောက်ထရံ၊ ကျောက်နီမော်သားတွေဟာ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေဖြစ် လာကြပေမဲ့ သူတို့ရဲ့မူလဇစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုတချို့ဟာ အခုထိ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒီယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်တွေ ပပျောက်ဖို့နဲ့ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထွန်းကားဖို့ အစ္စလာမ် သာသနာ့ဘောင်အတွင်းက တိုင်းရင်းသား ပီသအောင် နေထိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သူတွေဟာ ဒီရွာ မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဦးအနေနဲ့ ဒီစာကို ရေးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲ။
ငါ့တူရောက်ခဲ့တဲ့ ကျောက်နီမော်ရွာက မင်္ဂလာတောင်ပေါ်မှာ အုတ်ဂူဗိမာန်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီအုတ်ဂူဟာ ဦးရဲ့ ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာဖြစ်သူ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမား သခင်ဇွာ ခေါ် ဆရာကြီး ဦးနဇွာမွဒ္ဒင်ရဲ့အုတ်ဂူပါပဲ။
သူ့ကို အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သူတော်စင် တစ်ဦးလို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သူဟာ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့နဲ့ ဂျပန်ခေတ်တွေမှာ ရွှေဘို၊ ကန့်ဘဘူ၊ ဘုံးအိုးစတဲ့ဒေသတွေမှာ ပညာသင်ရင်းနဲ့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး၊ နယ်ချဲ့နဲ့ဖက်ဆစ် ဆန့်ကျင်ရေးတွေကို ဆရာချယ်(နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ပထမဆင့်) (၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမို ကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)၊ အခု အသက် ၉၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သခင်မင်းညို (ဗန်းမော်)၊ အာဇာနည် ဆရာကြီးဦးရာဇတ် စတဲ့ပုဂ်္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့အတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဂျပန်ခေတ် ဘုံးအိုးရွာသားတွေနဲ့ B.I.A တပ်ကြားမှာ သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ကိစ္စကို ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နဲ့အတူ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့သူပါ။ (သခင်တင်မြရဲ့ ဘုံဘ၀မှာဖြင့်ကိုကြည့်) ဒီဆရာကြီးဟာ လွတ်လပ်ရေးရအပြီးမှာ ရခိုင်ကိုပြန်လာပြီး ကျောက်နီမော်ရွာမှာ ““ဟေမာယတွလ် အစ္စလာမ်”” ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ့်အကျိုးဆောင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး တိုင်းတစ်ပါးသြဇာကင်းရေး၊ ဘာသာရေးအယူသီးမှုတွေ ပပျောက်ရေး၊ ဆင်းရဲသား များ ကောင်းစားရေး၊ အမျိုးသမီးများ ဘ၀မြှင့်တင်ရေး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးနဲ့အတူ ခေတ်ပညာကိုပါ သင်ယူရေး၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ရေးစတာတွေကို အမြော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ လှုံ့ဆော် တိုက်တွန်း သင်ကြား ပေးခဲ့တယ်။ ကျောက်နီမော်ရွာသား လူငယ်တချို့ကို သူအခြေစိုက်ရာ သံတွဲ ကိုခေါ်သွားပြီး ဘာသာရေးရော ခေတ်ပညာကျောင်းမှာပါ ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလူငယ် တွေထဲက တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ၊ ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ရှေ့နေ စတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ရော ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူတွေပါ အမြောက်အမြား ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ ဒီဆရာကြီးရဲ့ တပည့်တွေ ဟာ ခုချိန်ထိ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံး နိုင်ငံအတော်များများကို ရောက်ရှိ ပြီး ပညာသင်ကြားနေကြတယ်။
ဦးကိုယ်တိုင်က တောင်ငူ၊ ပုသိမ်၊ သံတွဲ အဆက်ဆိုပေမဲ့ ဒီဆရာကြီးနဲ့ ဆုံစည်းခွင့်ရခဲ့လို့ သူ့အကြောင်း၊ သူ့ရွာ ကျောက်နီမော်အကြောင်းကို ၁၉၆၇ လောက်ကစပြီး ခုချိန်အထိ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်နယ်က အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အယူသီးသမား ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတချို့ကတော့ ဒီဆရာကြီး ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကို မိစ္ဆာအယူ အဆတွေဆိုပြီး လက်မခံကြဘူး။
ဒါကြောင့်လည်း ခုနောက်ပိုင်းမှာ သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က ဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ ခေတ်ပညာမတတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမရှိတဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်အောင် မနေတတ်ဘူး လို့ ကောက်ချက် ချပြီး ပညာမျက်စိဖွင့် ပေးရမယ်လို့ ပြောတာကို ကျောက်နီမော်ရွာက ဒီဆရာကြီး ရဲ့တပည့်တွေအနေနဲ့ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ အနှစ်နှစ်အလလက သူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ ပညာရေးပန်းတိုင် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ငါ့တူတို့ထူထောင်ချင်တဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးအနေနဲ့လည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောချင်ပါတယ်။ ကျောက်နီမော်ကလူတွေဟာ ဘင်္ဂါလီ တွေမဟုတ် ဘူး။ ဝေသာလီ အဆက်တွေလို့ ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ ငါ့တူပြောသလို သူတို့ကို ဘာကြောင့် ကမန်ထဲမှာ ထည့်ရတယ်ဆိုတာ အခုပြောမယ်။
အမှန်က ဒီလူတွေဟာ ကမန်တွေ ရဲ့ဘိုးအေ တွေလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကမန်ဆိုတာ AD (၁၆)နဲ့ (၁၇) ရာစုကျမှ ရခိုင်ကိုရောက်တာ သူတို့က (၇)ရာစုကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရ ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားတွေထုတ်ပေးစဉ်က ကျောက်နီမော် ရွာသားတွေကို ရခိုင်လူမျိုး၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအဖြစ် မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဦးနေ၀င်းရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်မှန်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပဲရှိတယ်၊ ရခိုင်လူမျိုး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီး ကမ္ဘာမှာမရှိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ရခိုင်ခေါင်းဆောင်
ဒါကြောင့် အဲဒီဥပဒေမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁၈၂၄ ခုနှစ်မတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်ကိုရောက်နေတဲ့ အာရဗ်အနွယ်၊ ပါရှန်းအနွယ်တွေဟာ ကမန်တိုင်းရင်းသား တွေသာဖြစ်တယ်လို့ လ-၀-က ကသတ်မှတ်ပြီး၊ နောက်ပိုင်း ထုတ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်တွေမှာ ကျောက်နီမော်ရွာသားတွေဟာ ကမန်တွေ အဖြစ် ဖော်ပြခြင်း ခံရတယ်။
ဒါဟာ တကယ်တော့ လ-၀-က ရဲ့အမှားလို့လည်း မဆိုနိုင်ဘူး။ ““ရခိုင်အစ္စလာမ်ဆိုတာ မရှိဘူး”” လို့ ဇွတ်ငြင်းနေတဲ့လူတွေမှာသာ တာဝန်ရှိတာပါ။
← အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်များ နှုတ်ထွက်
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှု ဥပဒေ အတည် ပြု ပြီ →
10 responses to “ကိုကိုကြီး ၈၈-မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်သို့ ပေးစာ”
khine min September 12, 2012 at 5:50 pm · ·
crazy muslim.you are tellalie.don’t you shy? sauk kalar min toe amyay lain nay tay.min toe ka ta kyar lu tway nie pyaunt pyan pay.ae tar kyaune kalar pyie tar paw.fuck you.mother fuckers genaration.
Truthful Seeker September 9, 2012 at 11:26 pm · ·
@ Dr. May Myatnoe Khin, even if there are 50 sailors in 7th or 8th century, do you understand about generations after generations overaperiod of 700 years later? Have you question your logic? How did you become Dr.? Bribe someone to becomeaDr?
nainglinaung September 8, 2012 at 2:38 pm · ·
တကယ်တော့ ရခိုင်အကြောင်း ရခိုင်ပဲသိမှာပါ ………..အရင်…..တည့်တုန်းက အတူနေခဲ့ပြီး…………..
ကုလားဆိုတာ မုန်းရာတော့မဟုတ်ပေမယ့် သူများမြေမှာနေပြီး အဘိုးအဘွား ကတည်းက နေလာတာ ဒီမြေဟာလည်း ကျွန်တော်မြေပါလို့ ပြောလာတဲ့ ကုလားတွေက အများသား လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
ဒါပေမယ် ကာလဒေသ နဲလိုက်လျှောညီထွေဖြစ်အောင်တော့နေသင့်တာပေါ့ ……..ဒါပါပဲ
h1714167 September 8, 2012 at 2:14 pm · ·
ခက်တာက ငါနဲ့ဘာသာမတူ ငါ့ရန်သူဆိုပြီး လူသားအခြင်းခြင်းကို ဂျီဟတ်စစ်ကျေညာထား၊ သူတို့အရှင်ဆိုသူ အလာကို သူတိုကြောက်နေရတော့ မေတ္တာတရားက ကင်းစင်၊ အလာ့အတွက်ဆိုပြီး သားသတ် ယစ်တင်၊ အလာ့ကိုအတုယူ လူစင်မမှီတဲ့ ပလစ်ဂမီ(polygamy)ခွေးကျင့် ကျင့်၊ ဇီးတင်လူပွား အယူမှားနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်သာသာ လူသားတွေ ဖြစ်နေတော့ ယောက်ျားဆိုလို့ သားနဲ့အဖေ နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတောင် သားအဖချင်း သတ်နေရမယ့်သူတွေပဲ၊ ဘယ်နေရာ ဘယ်ကမ္ဘာသွားနေနေ ငြီမ်းချမ်းမဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာ၊ သူတို့အယူသာ သူတို့အပူ၊ ကမ္ဘာရဲ့အပူ။ သူတိုရဲ့ဘာသာကသာ သူတို့ပြဿနာ၊ လူသားတွေအတွက်ပြဿနာ ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
အလာ့အစား မေတ္တာတရားကို မွေးစားနိုင်ပြီး ပြဿနာကင်းလို့ ငြိမ်းချမ်းခြင်း ဆိုတာကို ခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Bu Thee September 8, 2012 at 2:48 am · ·
ဘယ်ကုလားမျိူးက ထ ပြီးအာချောင်နေတာလဲ၊ ပါးစပ်ပိတ်ထား၊ ကိုကိုကြီးကို ဘာမှသင်ပြနေစရာမလိုဘူး သင့်ထက်မျိူးချစ်စိတ်ရှိတယ်၊စာဖတ်သူတွေကို သူငယ်နှပ်စားတွေထင်နေလား၊ဒီမယ် ဦးကုလားကြီး ကုလားကျင့်ကုလားကြံတွေလာလုပ်မနေနဲ့ ရိုးနေပြီ ငှဲငှဲငှဲ
ayeaye September 8, 2012 at 12:23 am · ·
ayeaye September 8, 2012 at 12:19 am · ·
Do you not accept real history?
ချိန်တန်ပီ September 7, 2012 at 6:19 pm · ·
မှန်တာတော့ တော်တော်မှန်တယ် …. ဒါပေမယ့် စာရေးတဲ့သူဟာ ရခိုင်အကြောင်း တော်တော်လေ့လာဖို့ လိုသေးတယ် … ဒီလိုစာမျိုးကိုဘာလို့ အပေါ်ယံကြောပဲ ရေးရတာလဲ … ကမန်နဲ့ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး … မူလ လက်ဟောင်း ကမန်လူမျိုးတွေဟာ ရခိုင်တွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ဖို့ မလိုလားကြဘူး … နောက်ပိုင်း ဘင်္ဂါလီလို့ ခေါ်တဲ့ ဘင်္ဂလားက လာတဲ့သူတွေ ရှိတော့မှသာ ဘာသာတူတွေဘက်က ၀င်ပြီးပေါင်းစည်းသွားတယ်ဆိုတာ စာရေးဆရာသိဖို့လိုသေးတယ် … ရခိုင်တွေကိုယ်တိုင်လဲ လိုအပ်တာပါ … တောင်ကုတ်လို နေရာမျိုးတောင်မှ ကုလားတွေကို ထိန်းနိုင်သေးရင် တခြားနေရာတွေမှာ ဘာလို့ မထိန်းနိုင်ရမှာလဲ …
John September 7, 2012 at 4:48 pm · ·
you should mentioned what you want say exactly…You are from which side?do not try to teach to someone who has the way,determined,decided already …everybody can learn their self as of now days if they are adult.
Dr. May Myatnoe Khin September 7, 2012 at 3:46 pm · ·
၇ ရာစု ၈ ရာစုတွေမှာ သင်္ဘောပျက် အာရဗ်တွေ …….
How many Arab ships wrecked in that area at those days? A ship in those days may not carry more than 50 sailors. The paragraph is not logical.